Ukugcina | January 2022
Ukugcinwa kweGumbi lokuSebenzisa: Iimbono ezili-10 zokwenza ukuba iMisebenzi yemihla ngemihla ilula
Ingqokelela yesixhobo se-schüller iveza ezinye izisombululo zokugcina igumbi ezinobuchule eziyilelwe ukwandisa ukuhamba komsebenzi kunye nokwenza wonke umsebenzi ube lula.
Kulapho kufanele ukuba ugcine ukutya okwahlukileyo
Iibhanana akufuneki ziye efrijini kodwa ketchup kufanele!
Ikhaya elixineneyo linokubangela njani uxinzelelo- Izinto ezixineneyo kunye neMpilo yengqondo
Ukugcwala endlwini kuyonyusa amanqanaba oxinzelelo kwaye kuchaphazela impilo yethu, kuvavanyo olutsha kutyhilwe. Ngaphezulu kweepesenti ezingama-82 zeBrits ezivotelwe yiBlinds Hut zivume ukuba imeko yabo ichaphazeleka kukungqubana okuthile.
Ukucwangcisa iimpahla zakho zokunxiba-Ungazigcina njani kude iimpahla zasehlotyeni ebusika
Ekwindla kulapha kwaye ubusika buza ngokukhawuleza, oko kuthetha ukuba sombiwa kwezi knits ezinqabileyo kunye nezikhafu, kwaye siwangawangisa kwiimpahla zethu zeholide kunye neebhulukhwe ezimfutshane.
Iindlela ezi-7 zokufumana okuninzi kwisikhenkcezisi sakho
Fumana impendulo kulo mbuzo ubaluleke kakhulu: Ngaba inyama kufuneka ihambe kwishelufa ephezulu, ephakathi okanye esezantsi?
Kutheni le nto iPLATSA yeyona Range ibalulekileyo ku-Ikea yokuGcina iimpahla
Uluhlu lwe-Ikea lwe-PLATSA luyinto eguquguqukayo, yokugcina imodyuli enokukulandela kuzo zonke iindlela zobomi. Eyakhelwe ngokusebenzisa inkqubo yedowel yedowel, ifenitshala yeflethi ayikaze kube lula ukuyidibanisa kwaye iphinde idityaniswe.
Izimvo ezili-15 ezinesitayile zekhaya elihle elihlengahlengisiweyo
Gcina imali uyilo olungaphelelwa lixesha kumagumbi asebenza nzima kwaye wenze umsebenzi olula wokuxinana kwemihla ngemihla
Ngaba ikhona i-antique ebalulekileyo efihliweyo kwi-clutter yakho?
Ukuba ucwangcisa ukucoceka kwentwasahlobo, ungalahli nantoni na de ube uyazi ukuba kufanelekile. Kungenzeka nje ukuba ulungele ukulahla i-antique exabiso.
Ixabisa malini itekhnoloji yakho yakudala- ixabiso lokuthengiswa kwakhona
Iingcali zokonga imali zityhila ukuba zingakanani iifowuni ezindala eziphathwayo, iikhompyuter kunye nezinto zomdlalo ezithengisa nge-Intanethi.
umphezulu wemihlobiso yekhabhinethi yasekhitshini
I-satin xa ithelekiswa nepeyinti ebengezelayo
iishelfu zokulala kwigumbi langoku
iingcebiso zokuhombisa igumbi
UMartha Stewart Umthi weKrisimesi